Hondo yekutengeserana pakati peChina neUS inowedzera | Ehupfumi Zvemari
Hondo yekutengeserana pakati peChina neUnited States inowedzera
Masoko emasheya kutenderera pasirese akasangana nezuva rakaomarara semhedzisiro yechikamu chitsva icho hondo yekutengeserana iri pakati peChina neUS. Kutevera mazwi emutungamiri wenyika yeAmerica, Donad Trump, mupfungwa yekuti aizo wedzera kunze kwenyika zvigadzirwa zveChinese na mitero inosvika ku25%. Muvhiki yakakosha yekufambira mberi kwakanaka kwechibvumirano chinogona kugumisa misangano isingaperi pakati pemativi ese kusvika panogutsa muhondo yekutengeserana iri kuva pakati penyika mbiri dzine simba kwazvo pasi rose.
Zvinoitwa nemisika yemakambani hazvina kutora nguva kuti zviuye nekudonha uko kwanga kusiri kuyeukwa kwemwedzi yakawanda. Misika yeAsia yaive nebasa rekupa yambiro yakakomba kune vashoma nevapakati varimari apo mutengo wemasheya avo wakadonha zvine chisimba mukati menguva dzekutanga dzeMuvhuro. Iwo makuru emisika yemasheya indices akadaro ne6%, nepo iyo Nikkei anobva kuJapan yakadzikira pakatenderedza 2%. Kupa yambiro nezve izvo zvaizoitika maawa gare gare mumasitoko ekutsinhana kwekondinendi yekare uye kuti zvaisagona sei neimwe nzira muNorth America pachayo.
Mukupedzisira, kuderera kwemari yeEurope kwaisave kwakaipa sekufungidzirwa ne misika ramangwana. Pakupera kwechikamu cheMuvhuro, indices dzaive dzichitenderedza dzakatenderedza XNUMX muzana poindi, kunyangwe paine kusava netariro nezve vavariro dzevarimi. Kusvika padanho rekuti manzwi akasimudzwa mupfungwa yekuti mafambiro aya anogona kunge ari enongedzo yeiyo nhanho yembavha mumisika yemari. Iko mune dzimwe nguva dzehunhu mamwe matsigiro ehukosha hwakakosha akatotyorwa uye ichi chinhu chisina kufarira chikamu chakanaka chevanoongorora zvemari.
1 Hukama hwekutengeserana neChina
2 Tichafanirwa kumirira kusvika Chishanu
3 Tsvaga kushomeka mumisika
4 Mabhangi nemakambani esimbi ndiwo anomira zvakanyanya
5 Mwedzi isingafadzi yemusika wemasheya
6 Zvakaoma kushanda
Hukama hwekutengeserana neChina
Chinokonzera dambudziko iri chiri muhukama hwekutengeserana pakati peChina neUS. NeChishanu chino zvakanzi ngapave nechibvumirano pakati pemapato ese, asi zvataurwa nemutungamiri weAmerica, Donad Trump, anga ari chirongo chemvura inotonhorera maonero evarombo. Kwete zvisina maturo, chinangwa chake ndechekusimudza mutero pazvigadzirwa zveChinese zvinobva pa10% zvichienda pasi pe25%. Ndokureva, kanenge katatu uye iyi ndeimwe yenhau dzakaipisisa iyo misika yemari inogona kugamuchira panguva ino.
Kusvika padanho rekuti kubva ku International Monetary Fund (IMF) yakaziviswa mumazuva ano kuti kuti kuve nekukura kwehupfumi hwenyika dzese, zvido zvevaChinese zvinofanirwa kutariswa. Uye iyo inogona kukwira mukutengeserana mitero haisi nhau dzakanaka kudzikamisa misika yequity. Kwete zvakanyanya kushoma, sezvo zvaunganidzwa nemasaga kutenderera pasirese. Mune zuva risingafadzi kune zvido zvevashambadziri vadiki nepakati vakaona kuti mitengo yezvikamu yakurumidza kudzika sei. Nematunhu ese ebhizinesi akanganiswa neiyi kutengesa tsika.
Tichafanirwa kumirira kusvika Chishanu
Chero zvazvingaitika, izwi rekupedzisira harina kutaurwa uye zvichave zvakakosha kutarisa kuti misika yemakambani inoshanduka sei svondo rino. Kumirira kuona kana ichingova zano remutungamiri weAmerica, Donad Trump, kuita chibvumirano chinobatsira zvido zvavo. Mupfungwa iyi, iyo kufungidzira kwevamwe vaongorori yemisika yemari inotenda kuti mukupedzisira ropa harizoyerere mukufamba mukati memusika wemasheya. Kunze kwemamwe akateedzana ezvehunyanzvi kufunga uye pamwe zvakare kubva pakuona kwezvakakosha.
Nepo kune rimwe divi, chii chiri chokwadi ndechekuti yakaburitsa yakashata kwazvo mamiriro ezvepfungwa pakati pevashambadzi vadiki nepakati. Iko iyo kumanikidza kutengesa kwaiswa zvakajeka pane muenzanisi uye nesimba rakanyanya kucherechedzwa. Iine huwandu hwakanyanya kwazvo hwezvibvumirano, zvese mumisika yeAsia uye mune yekondinendi yakare. Nekutya kuti pangasave nechibvumirano muhondo yekutengeserana pakati peChina neUnited States pakupedzisira.
Tsvaga kushomeka mumisika
Imwe yemhedzisiro yekutanga kweichi chokwadi ndeyekuti kumisikidzwa kwakaiswa senge zano iro zviuru nezviuru zvevatengesi zvavari kutsvaga kuchengetedza zvinzvimbo zvavo. Kutya kuti kuderera uku kunogona kuwedzera mumisika yemari. Naizvozvo, hapazovi nesarudzo kunze kwekumirira mazuva mashoma kuti uone kuti chiitiko chitsva ichi chehondo yekutengeserana pakati peChina neUS chiri kupera sei. Kunyangwe zvichishamisa kwazvo kuti ndezvake Trump Chero ani anokwevera shanduko yemabhegi pasi kana chaizvo anga ari mudziviriri wayo mukuru. Iko, zvese zvinoita kunge zano rekuzadzisa chibvumirano chiri nani chekutengeserana nemaChinese.
Chero zvazvingava, zvichave zvakafanira kuti unyatsoziva nezve shanduko yazvo nekuti zvinoenderana nedungamiro inogona kutorwa nemusika wemasheya kubva ikozvino zvichienda mberi, mune imwe pfungwa kana imwe. Kusvika padanho rekuti rinogona kukubatsira iwe kuwana mari yakawanda mukuita kwakaitwa kana, pane zvinopesana, kukusiira maeuro mazhinji munzira. Nemusiyano wakakurumbira pakati peimwe maitiro uye imwe inozoratidza kushanduka kwenzvimbo yako yekudyara kubva panguva dzino chaidzo. Zvisinei, mwedzi wa May haana kutanga neakanaka vibes kune zvido zvevashambadzi vadiki nepakati.
Mabhangi nemakambani esimbi ndiwo anomira zvakanyanya
Mukati meiyi mamiriro ekuderera muzvikamu zvakanyorwa pamisika yemari, hapana mubvunzo kuti iwo mabhanga nemakambani esimbi akagadzira kuita kwakaipisisa uye pamusoro pezvimwe zvikamu zvakakosha mumusika wemasheya. Kutungamira kurasikirwa kweichi kutanga kwevhiki, uye izvo mune yechiSpanish kesi, kwareva kuremerwa kwakasimba kwazvo pamusoro pe3%. Mushure memavhiki mashoma mavakange vatora nzvimbo dzavo mushure mekuita kwakanakisa pane yekutengesa pasi. Kuve maviri ezvikamu zvakaratidza kusagadzikana kukuru mukuchinja kwemitengo yavo.
Kune rimwe divi, iyo haigone kukanganwika uye ichitaura nezvemaSpanish equities, kuti indices dzayo dziri panguva yekukurumidza. Mushure mekupedza mavhiki mazhinji muitiro wekujeka kwekupedzisira, ine zvitsigiso pa9.200 uye 9.600 mapoinzi kuitira kuti pakupedzisira zvifungwe zvekukwira kana kudzika. Iko kubva ikozvino zvichienda mberi, zvese zvinogona kuitika sezvo zvinhu zviri mumisika yemari. Zvekuti nenzira iyi, vadiki nevepakati varimimari vari kana havasi munzvimbo yekuvhura nzvimbo munzvimbo dzavanodyara mumusika wemasheya, sezvingave zvavanoshuvira mune dzimwe nyaya dzavo.
Mwedzi isingafadzi yemusika wemasheya
Zvisinei, pane chinhu chimwe chete chechokwadi, uye ndiko kuti tiri kupinda mumwedzi mishoma iyo isinganyatsobatsira kukurumidza kwemisika yemari. Asi, zvakapesana, sezvazvakaitika mumakore achangopfuura. Kune rimwe divi, isu tiri zvakare padhuze nemwedzi yezhizha uko iyo kondirakiti vhoriyamu inoderera zvinoshamisa kwazvo. Nemabasa mashoma ekutenga nekutengesa uye kusagadzikana kukuru mavari. Ichi chinhu chinofanirwa kutarisirwa kana uchigadzira chero zano rezvekudyara. Naizvozvo, chenjedzo inofanirwa kuve dhinomineta yezviito zvedu kubva zvino zvichienda mberi uye pamusoro pezvimwe kufunga.
Nepo kune rimwe divi, zvakafanira kugadzirisa zvimwe zvakawandisa zvakaitika mumwedzi iyi umo zvimwe yakwira zvikonzero zviri pachena zvekusimudzira mafambiro epamusoro. Hazvishamisi kuti nguva iri pakati paMay naGumiguru ndiyo imwe yenzvimbo dzakaipisisa dzekuvhura zvinzvimbo pamusika wemasheya. Kuve kutariswa nevanoongorora zvemari seimwe yeiyo zvakaipisisa pakuita kuchengetedza kunobatsira. Pane kupokana, inguva yakanaka kuve yakazara mvura muaccount account. To gare gare tora mukana wemabhizinesi mikana iyo inobuda mumasvondo anotevera.
Mupfungwa iyi, hazvigone kukanganwika kuti pane mukana wakanaka wekuti mutengo wezvikamu unenge wakakwira kwazvo mushure memazororo. kukwikwidza kupfuura izvozvi. Uye mamiriro ezvinhu aya pasina mubvunzo anofanira kutora mukana wekuvandudza mashandiro atinofanira kuita muchikamu chekupedzisira chegore rino remusika wemari. Mune chiitiko icho chisiri kuve chiri nyore kwazvo kusimudzira chero rudzi rwerongero mumisika yemari.
Iko kune iko kunyange kutaura nezve kuri kuuya kwehupfumi kweupfumi kunogona kutisiya isu takabatiswa munzvimbo dzakashama mumisika yemari. Chinhu icho pasina mubvunzo chinoita kuti varimi vabve parudzi urwu rwekudyara. Kunyanya kuchengetedza mari yako kuzviitiko zvinogona kuitika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Hondo yekutengeserana pakati peChina neUnited States inowedzera
Vibex: iyo index yekusagadzikana mumusika weSpanish wemusika
Iwo maindekisi eSpanish stock stock: kuisa mari yacho